Akachipa OBB Chitiketi Matikiti Uye Kufamba Mitengo | Save A Train
Akachipa OBB Chitiketi Matikiti Uye Kufamba Mitengo
musha > Akachipa OBB Chitiketi Matikiti Uye Kufamba Mitengo
Pano unogona kuwana ruzivo rwese nezve Matikiti eOBB anodhura uye OBB mitengo yekufambisa uye zvakanaka.
Topics: 1. OBB neTreni Zvikuru
2. About OBB 3. Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Ahibhura OBB Chitiketi Tiketi
4. Akawanda sei matikiti eOBB 5. Maitiro Ekufamba: Nei zvirinani kutora zvitima zveOBB, uye kwete kufamba nendege
6. Ndeupi mutsauko uripakati peSystem, Nyaradzo, uye Sparschiene paOBB 7. Pane here kunyoreswa kweOBB
8. Nguva yakareba sei kusimuka kweOBB isvike 9. Ndeapi maOBB masheji emuraudzo
10. Izvo zviteshi zvinoshandiswa neOBB 11. OBB MIBVUNZO
OBB neTreni Zvikuru
Nechiyero chepamusoro chekuita 96%, OBB (dzimwe nguva inonzi OEBB) ndeimwe yevanonyanya kuvimba nechitima vanoshanda muEurope.
Makore ose, OBB inotora 447 mamirioni vanhu uye 105 mamirioni ematani emidziyo mhiri kwese kwavanoenda mukati meAustria nekuEurope.
OBB yakanyanya nharaunda, uye 100% yemagetsi avo ese anosvinudzwa kubva simba rinowanikwazve.
OBB ndiyo inonyanya kufambisa basa muAustria.
OBB, Austrian Federal Railways, ndiro rimwe zita reAustria Federal Railways. Sezvo yakavambwa mukati 1923, OBB yakapa mabasa ekufambisa kune vagari veAustralia kwemakore ikozvino. Ongororo ichangobva kuitwa yakaratidza kuti muEurope, OBB ndiyo yakanaka kwazvo pakuita nguva, kuvimbika, uye frequency.
OBB inopa mabasa echitima mukati meAustria uye neEuropean. Tiketi chaipo, you can visit all the best nzvimbo dzekuzorora muEurope. Nemhando dzakasiyana dzematikiti uye makadhi kunyoreswa, OBB inopa kune wese wese zvinodiwa.
OBB inodzidzisa kazhinji Vienna – Graz, Salzburg – Vienna, Linz – St. Polten, Graz - Salzburg. Iwe unogona zvakare kusvika kune nyika dzakavakidzana mukati meEurope uchishandisa OBB zvitima.
Kupfuura mubatanidzwa, 41,904 vashandi vanoshanda muchitima chechitima uye pamabhazi (kuwedzera pamusoro 2,000 vadzidzi) iva nechokwadi chekuti vamwe 1.3 mamirioni vanopfuura vanosvika vakachengeteka kwavanoenda zuva rega rega.
Enda ku Sevha Iyo Chitima Yeji kana kushandisa iyi yejeti kutsvaga anodzidzisa matiketi eOBB
– Sevha A Chitima iPhone App
– Sevha Chitima Android App
Kudzoka Zuva (Inesarudzo)
Pamusoro Pfungwa Kuti Utore Ahibhura OBB Chitiketi Tiketi
nhamba 1: Bhuka matikiti ako eOBB mberi kwazvo sezvaunokwanisa
Mutengo we OBB matiketi echitima rinosimuka sezvo zuva rekufamba roswedera. Iwe unogona kuchengetedza mari nekuregedza ako OBB matiketi ezvitima zvakanyanya sekukwanisika kubva zuva rekuenda. Matikiti echitima eOBB anowanikwa sepakutanga 3 kuti 6 mwedzi pamberi pekubva muchitima. Kutarisisa kwepamberi kunovimbisa kuti iwe unowana yakachipa OBB matiketi echitima. Ivo zvakare vakadzikira muhuwandu, saka nekukurumidza iwe bhuku, zvakachipa kwauri. Kuchengetedza mari kumatikiti echitima eOBB, tenga matikiti ako mangwanani.
nhamba 2: Kufamba neOBB panguva dze off-peak nguva
Matikiti echitoro cheOBB ari zvakachipa panguva yekubhururuka-yepamusoro, pakutanga kwevhiki uye pakati pezuva. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuwana isingadhuri chitima matikiti mukati mevhiki. Musi weChipiri, Chitatu, neChina, Matikiti echitima eOBB ndiwo ehupfumi zvakanyanya. Nekuda kwehuwandu hwevashandi vebhizinesi vafambi vanoenda kubasa mangwanani nemanheru, matiketi echitima anodhura akawanda. Izvo zvakachipa zvakanyanya kufamba chero nguva pakati pekusvika mangwanani uye manheru manheru kuenda. Kupera kwevhiki ndiyo imwe nguva yepamusoro yezvitima, kunyanya neChishanu uye Mugovera. OBB train ticket prices also increase on zororo revanhu uye zororo rechikoro.
nhamba 3: Raira matikiti ako eOBB paunenge uine chokwadi nezve yako yekufamba nguva
OBB zvitima vari kudiwa zvakanyanya, uye nemakwikwi mashoma, parizvino vanoramba vari sarudzo yepamusoro yezvitima muAustria. Ivo vanokwanisa kukwanisa kumisa zvitambi zvechitima senge izvo zvavanazvo zvinorambidza kuchinjanisa matikiti kana kudzoserwa kunze kwekunge iri iro Bhizinesi remhando yetikiti.. Kunyangwe hazvo pachine mawebhusaiti iwe paunogona kutengesa matiketi ako ruoko rwechipiri kuvanhu, OBB haibvumiri kutengesa kwechipiri-ruoko tiketi. Izvi zvinokubatsira sei kuchengetedza mari? Ronga tikiti rako chete kana uine chokwadi nezvechirongwa chako chinogona kukuchengetedza kubva kubhuku rimwe chete tikiti nekuti chimwe chinhu chakauya uye haugone kushandisa litikiti rekare.
nhamba 4: Tenga matikiti ako eOBB paSave A Chitima
Sevha Chitima chine chikuru, zvakanakisa, uye zvakachipa zvinodhura matikiti ezvitima muEurope. Kubatana kwedu nevazhinji vafambisi vechitima, masitiketi echitima, uye kuziva kwedu tekinoroji maalgorithms anotipa mukana kune zvakachipa zvechitima tikiti matikiti. Isu hatingopi zviputi zvetiketi zvakachipa zveOBB chete; isu tinopa zvakafanana kune dzimwe nzira dzeOBB.
Salzburg kuenda Vienna matiketi
Munich kuenda kuVienna matikiti
Graz kuenda Vienna matikiti
Prague kuenda kuVienna matikiti
Akawanda sei matikiti eOBB?
Matikiti eOBB anotanga kubva € 1,5 kusvika pakakwirira se $ 51 parwendo rwechitima chimwe chete. The mutengo weOBB tikiti rechitima zvinoenderana nerudzi rwetiketi raunotenga uye paunosarudza kufamba:
Tiketi-yeimwe nzira Round rwendo
Standard € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Chekutanga Kirasi € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Maitiro Ekufamba: Sei zviri nani kutora OBB zvitima, uye kwete kufamba nendege
1) Unosvika kuCity Center. Iyi imwe mukana weOBB zvitima kana uchienzaniswa nendege. Zvitima zveOBB uye zvimwe zvimwe zvese zvechitima zvinofamba kubva chero kupi zvako muguta kusvika pakati peguta rinotevera. Izvo zvinokuchengetedza iwe nguva uye mutengo wekeji kubva kuairport kuenda kuguta. Nezitima zvinomira, zviri nyore kuti uende chero kupi zvako muguta rauri kuenda. Hazvina basa kuti uri kubva kupi uchibva, Munich, Salzburg, Linz, kana Cologne, nzvimbo yemaguta inomira yakakura mukana weOBB zvitima!
2) Kufamba nendege kunoda kuti iwe uve panhandare yemaawa anoverengeka nguva yako isati yasimuka. Iwe unofanirwa kuenda nekuongororwa kwekuchengetedza usati watenderwa kukwira ndege. Nezitima zveOBB, iwe unongo fanirwa kuve pachiteshi pasati pasvika awa pamberi. Kana iwe ukafungawo nezvenguva iyo zvinotora iwe kuenda kubva kuairport kusvika pakati peguta, iwe unozoona kuti OBB zvitima zviri nani maererano neyakwana nguva yekufamba.
3) Pamusoro, mutengo weOBB matiketi ezvitima anoita sekunge ari kudhura kudarika bhajeti yematikiti emhepo. zvisinei, kana uchienzanisa zvese zvinopomerwa zvinosanganisira, Matikiti echitima eOBB ane mutengo uri nani. Nezvimwe mutengo semabhadharo echikwereti aunofanirwa kubhadhara kuzvitima, kufamba neOBB ndiye akanakisa.
4) Zvitima zvine zvakatipotera Hushamwari. Mukufananidza pakati pezvitima neendege, zvitima zvaibuda pamusoro. Ndege dzinosvibisa mhepo nemhepo yakadzika kwazvo. Zvitima mukuenzanisa zvinopa kunze Carbon 20X yakaderera pane ndege.
Munich kune Innsbruck matikiti
Salzburg kune Innsbruck matiketi
Oberstdorf kune Innsbruck matikiti
Graz kune Innsbruck matikiti
Ndeupi mutsauko uripakati peSystem, Nyaradzo, uye Sparschiene paOBB?
OBB ine makirasi akasiyana ezve matikiti emari dzakasiyana uye nemhando dzevanofamba: ingave yebhizinesi kana nhandaro. Iwe unogona kuve nechokwadi chekuti imwe yematiketi aya anokodzera iwe.
Matikiti akajairwa OBB:
Iwo akajairwa tikiti ndiyo inoshandura tiketi zvakanyanya. Kana iwe uchifanira kufamba pane pfupi chiziviso, iwe unofanirwa kuwana iyi tikiti. Hauna kuganhurirwa kune chimwe chitima, uye unobvumidzwa kusarudza chinongedzo chako. Tiketi yeOBB yakajairika inoita 2 mazuva zvisinei neye nzira uye yekutenga chiteshi. Matikiti akajairika anogona kudzoserwa mahara pasina zuva pazuva raro rekutanga rekubvumidzwa. Kana uchitenga iyi tikiti online, kune yakasarudzika mirayiridzo yekudzosera uye kushanda kwayo.
OBB Matikiti ekunyaradza:
Matikiti eOBB Komfort anogara ari OBB matiketi, uye ivo vanoitirwa kubatana kuburikidza nechitima husiku. The OBB Komfort ticket covers the cost of the journey, kuchengetwa kuri muchikamu chekufamba chakasarudzwa, uye kudya kwemangwanani mukamuri yekurara.
Kusiyana nechitambi chakajairika, tikiti reKomfort harichinjike zvachose. Yakagadzirirwa imwe nzira uye nechitima chakati. Iwe unofanirwa kuwana tiketi nyowani yekubatanidza chero isati yasvika uye nenzira inoitwa neiyi tiketi.
Nezvemabhadhariro, Matikiti eOBB Komfort anodzoserwa mahara pasina 15 mazuva kusvika pazuva rekutanga rechokwadi. Mushure me 15 chiratidzo chezuva, Matikiti eKomfort anodzoserwa ku 50% yemutengo wepakutanga.
OBB Sparschiene matikiti:
Asides kubva ku standard tikiti uye Komfort tikiti, OBB inopa imwe huwandu hwematikiti anozivikanwa seSparschiene tikiti. Uwandu uhwu hwakachipa uye kune vashoma-bhajeti vafambi. Iko kune maviri marudzi e Sparschiene matikiti.
Pane here kunyoreswa kweOBB?
Kune vagari venzvimbo, kune marudzi maviri ekunyorera, iyo Vorteilscard neOsterreichcard. Kune Internalals tinokurudzira kutenga nguva yakareba pamberi uye ipapo iwe uchaunzwa pamwe neinodhura sarudzo.
Vorteilscard Classic inogona kutengwa pa: (vagari venzvimbo vanogashira a 45% kuderedzwa pane imwe standard tikiti revatengi vanotenga tikiti ravo kubva)
– OBB matiketi ekuverengera.
– Kune OBB vatengi basa 05-1717
– Kubva kuvashandi veOBB zvitima nemabhazi.
Iine Osterreichcard Classic, iwe uchagamuchira yakawedzera kuzvidzikisira booking ye 5% patiketi imwe chete yakajairika yevatasva kana uchitenga tikiti kubva:
– An OBB tikiti vending muchina muchitima chechitima.
Vapfuuri vezera 15 uye pamusoro unogona kutenga Vorteilscard Mhuri. Kadhi iri rinoshanda pamwe chete nekadhi chiratidzo chitupa, izvo zvinofanirwa kusanganisira zera remuridzi. Tiketi iyi, unogona kufamba pazvitima zvese zveOBB.
Vese vabati veVorteilscard Mhuri vanofarira zvigaro zveVorteilscard yekirasi. Mukuwedzera kune yakasarudzika mafakisi, vaviri vanobata yeVorteilscard Mhuri kadhi zvakare vanogashira iyo mutero kana ivo vachifamba pamwe nemwana mucheche kana mwana. 4 vana pamunhu akabata yeVorteilscard Mhuri ichagamuchira mutero we 100% pakiti imwe chete.
Austria Pwere Kadhi
Kusvika pazuva risati ravo ramakore makumi maviri nemairi, vafambi vanogona kutenga Osterreichcard Jugend. Unogona kuratidzira zera rako nefoni ID nehuchiono hwezera.
Vabereki vese vevacheche nevana vanogamuchira mvumo yemhuri muAustria kana imwewo nzvimbo vanogona kutenga Osterreichcard Mhuri. Izvo zvakanaka zvacho zvakafanana neiyo yeOsterreichcard yekirasi.
Vapfuuri vanogona kutenga Osterreichcard Classic. Iine Osterreichcard Classic, ivo vachagamuchira mutero we 100% on the cost of seat reservations for 1st and 2nd class. With an Osterreichcard Classic 2nd class, unogamuchira a 50% kuderedzwa pane shanduko yekirasi kubva 2nd kusvika 1st kirasi ine yakajairwa mhando imwe tikiti.
Vagari vemuAustria vakakwira vanopinda zera 63 uye pamusoro unogona kutenga Osterreichcard Senior. Izvo zvakanaka zvacho zvakafanana neiyo yeOsterreichcard yekirasi.
Austria Kadhi Inokosha
Vakaremara vanhu vane zvinotevera zvinopinda mugiredhi ravo reAustria rekuremara kana yekuremara kwakakonzerwa nehondo vanogona kutenga Osterreichcard Spezial. Izvo zvakanaka zvacho zvakafanana neiyo yeOsterreichcard yekirasi.
Linz kune Saint Polten matikiti
Vienna kuenda kuSalzburg matiketi
Saint Polten kuenda kuWiener Neustadt matikiti
Salzburg kune Graz matiketi
Nguva yakareba sei kusimuka kweOBB isvike?
Zvakaoma kutaura chokwadi kune wechipiri, asi Chengetedza Chitima chinopa zano kuti unosvika inenge awa nguva yako yekubva isati yaenda. Kana iwe uchipedza kumusoro kwepasipoti tonga kutanga zvakakwana, iwe unogona kuzvitengera zvinhu zvaunoda kuti rwendo rwako rwechitima ruve rakagadzikana sezvinobvira.
Ndeapi maOBB masheji emuraudzo?
Unogona kuwana mune chaiyo-nguva kumba kwedu paSave Chitima. Ingo nyora munzvimbo yako ikozvino uye kwaunoda kuenda, uye isu tinokuratidza ruzivo.
Izvo zviteshi zvinoshandiswa neOBB?
Iyo Vienna station yeOBB ndeye Vienna Hauptbahnhof (Vienna pakati chiteshi), iyo iri padyo neSudtiroler Platz pamoyo weVienna.
MuLinz, Mazuva ano OBB zvitima ibva uye usvike kubva kuLinz Central Station (Central station muGerman yakaenzana Hauptbahnhof), kusiri kure nerwizi rweDanube.
Chiteshi chikuru chechitima chechitima (Salzburg Central Station) iri pakati peguta yechipiri rakakura muAustria – Salzburg.
Vari Bikes Inobvumidzwa PaBhodhi iyo OBB Zvitima?
Ita Vana Vanofamba Vakasununguka pane OBB Chitima?
Ehe, asi kungosvika kune rimwe zera. Vana vari pasi pemakore matanhatu vanofamba vakasununguka.
Ko Zvipfuyo Zvinotenderwa pane OBB Zvitima?
Ehe, ivo vakareba sezvo ivo vachitevera nhungamiro yezvipfuyo. Zvipfuyo zvidiki zvinofanirwa kutakurwa mukatati kana yakafanana kesi.
Ndeapi maitiro ekubhodhi eOBB?
Dzimwe nhepfenyuro dzive nemagetsi zvinoratidza izvo kuumbwa kwezvitima. Uyezve, shandisa izvi kutarisa matunhu kuti nhamba yemqeqeshi wechairo ichave kana chitima chasvika.
Yakanyanya Kunzwisisa OBB FAQ – Ndinofanira here kuraira chigaro mberi pane OBB?
iwe kugona boOK munhu ndinozivapa kufanoita on domestic OBB zvitima zve 3 euros. iwe chido get a personal chigaro mushure mekugadzirisa.
Iko kune WiFi internet mukati meOBB?
Ehe. Unogona kunakidzwa Yemahara WiFi internet pamaseti ese OBB uye ese makirasi ekufamba kana iwe uchitenga OBB matiketi (Zvikurukuru paSaveATrain.com.
Kana iwe wakaverenga kusvika panguva ino, unoziva zvese zvaunoda kuti uzive nezve OBB zvitima zvako uye wagadzirira kutenga yako OBB chitima chitima pa Save A Train
Tine Zvitiketi zveTreni kune aya majanji anoshanda:
Iwe unoda here kubatidza peji ino kune yako saiti? Click pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code), Kana kuti unogona kungobatanidza zvakananga kune ino peji.
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml uye iwe unogona kushandura iyo / de ku / nl kana / fr uye mitauro yakawanda.
Business Travel nechitima
Car Kufamba Matipi
Eco Kufamba Matipi
Rovedza Kufamba Austria
Rovedza Kufamba Belgium
Chitima Kufamba Bulgaria
Chitima Kufamba China
Chitima Kufamba Denmark
Chitima Kufamba Finland
Rovedza Kufamba Germany
Chitima Kufamba Hungary
Chitima Kufamba Luxembourg
Chitima Kufamba Norway
Rovedza Kufamba Portugal
Chitima Kufamba Scotland
Rovedza Kufamba Spain
Rovedza Kufamba Sweden
Chitima Kufamba Switzerland
Rovedza Kufamba Turkey
Chitima Kufamba UK
Yoga mu Europe